Ufakelo lwesithathu nolokugqibela lolu vavanyo kunye nerhamncwa le-LG. Kule nxalenye siza kuthetha ngayo ukusebenza esinokukufumana kwisiphelo sendlela kwaye "yintoni ukusetyenziswa" kwamandla amaninzi afakwe phakathi kwezi zibini kunye necingo zesilivere.
Into yokuqala ... Inkqubo. INvidia Tegra 2 intle kakhulu. Le fowuni inayo amandla amangalisayo. Iyakwazi ukuhamba Iividiyo ezipheleleyo ze-HD 1080p kuyo nayiphi na iTV ngentambo ye-HDMI ngokulula emangalisa. Usebenzisa i-SD yangaphakathi ezisa nayo, kunye ne-microSD yakho ukubeka umxholo wemultimedia, uya kuba nomdlali obalaseleyo wokusa naphina apho ufuna khona, qhagamshela kwiTV kunye negalelo le-HDMI kwaye wonwabele imovie, uthotho okanye iividiyo ze-YouTube.
Ukusebenza kwimidlalo, inyaniso, andikwazi ukuqinisekisa. Uninzi lweemidlalo "ezifanelekileyo" njengeGameloft HD kunye neMidlalo ye-EA, umzekelo, kufuneka ukhuphele idatha kwi-SD. Siba nengxaki. Imemori engagqibekanga ye-SD yi-SD yangaphakathi. Inkqubo ye- ii -apps zokusebenza zikhutshelwe kwi-SD yangaphandle, kwaye ziyangqubana ne-SD yangaphakathi ye-LG, kwaye ibuyisela impazamo. Kukho okuphunyeziweyo "kokufaka" iifayile ze-apk zezicelo kwaye ukwazi ukuzifaka kwi-LG ngaphandle kwengxaki. Andiphumelelanga. Kukho enye indlela "yokujoyina" ezi nkumbulo zimbini. Ingcambu iyafuneka kwaye ifowuni ayiyiyo eyam. Akukho ngxaki, nangona kunokwenzeka ukuba bayenze lula kancinci.
La ukulayishwa / ukufakwa kwesicelo kwenzeka ngesantya esimangalisayo. Iyakwazi ukulawula ufakelo ngaphandle kokufumanisa. Ungafaka usetyenziso ide imemori igcwele, kwaye sele ubeke. Icala elisezantsi kuphela ekubekeni usetyenziso kukungxengxeza okulungiselelwe kwimenyu. Ukusetyenziswa kwefowuni ngokungagqibekanga kuhlelwe ngokwe-alfabhethi kwelinye icala. Okulandelayo, ngokulandelelana kofakelo, zonke ezo uzifaka ngeemarike okanye nge .apk. Khange ndikwazi ukutshintsha lo mbutho uba sisiphithiphithi.
Ukuqhubeka nomxholo we-LG interface yale terminal, igama ukuyichaza yile, ukulula. Kodwa mhlawumbi kulula kakhulu. Ndithanda ujongano lomsebenzisi njengeyokuqala ye-Android, okanye iCyanogenMod's ADW umzekelo. Andikuthandi ukungafihli kunye nokuncamathela kweHTC Sense kakhulu, umzekelo. Kulabo bathanda ujongano olunobunkunkqele, ngakumbi oopopayi, abahle ngakumbi, okanye abaphezulu, isikhombisi-ndlela se-LG sesi sigxina siya kubagqitha ngokukhawuleza.
Ngokuphathelele Ibhentshi esinokuthi siyifumane kwiQuadrant… Iyamangalisa. Inkqubo ye- iziphumo zihlala ziphakathi kwama-2500-2550. Ii-terminals ezine-HTC Sensation zihlala zikufutshane (azinakuthathelwa ngqalelo) ngo-1800-1900, kwaye kwimeko ye-Galaxy S2 siza kube sithetha malunga nama-3000 malunga. Esi siphumo sibonisa ukuba ukubheja kwesi sisiphelo sezixhobo zesikhombisi kuphezulu kakhulu. Kubonakalisiwe kuncedo lokuhambisa uqhagamshelo lwe-HDMI, ukukhululeka kokuhamba kwemidlalo (ngokubukela iividiyo), ukukhululeka kokulayisha usetyenziso ... Konke oku kuncitshiswe kakhulu yiFroyo 2.2.2 ukuba iyayifaka. Ndiqinisekile xa esi siginali sihlaziya Isonka sejinja siya kukhawuleza, sisebenze ngakumbi kwaye siphucule amava omsebenzisi.
Iimpazamo endiyifumeneyo, zimbalwa okanye azikho ezifanelekileyo. Ndiyithatha njengengxaki enkulu yokudlala. Ukutshintsha ifayile ye-.apk ukuze ufakele umdlalo ayiyongcamango ilungileyo. Enye impazamo endiye ndadibana nayo kukuba xa utshixa (usebenzisa iqhosha elicinywayo) i-terminal, xa uvula iscreen ngeqhosha elifanayo, ukuvala isikrini akuveli ekuqaleni; xa ivuliwe, iscreen ebesiphambi kokubhloka sivela kwishumi lomzuzwana emva koko ukubhloka kuyabuya. Ndiqinisekile ukuba ingasombululwa nge-Gingerbread (kuvakala ngathi ibisele isenzeka kwi-HTC Desire yam). Impazamo yokugqibela endiyifumeneyo ayixhomekekanga kwi-LG kodwa kubonakala ngathi inomdla kum: xa ubukele ividiyo ye-YouTube, cima isikrini, kwaye ividiyo ye-YouTube iphela, i-terminal izitshixe ngokuzenzekelayo; ukuya kwinqanaba lokususa istasing kwaye utsale ibhetri. Kwenzekile kum ngevidiyo eyedwa kunye noluhlu lweevidiyo, ekugqibeleni kweyokuqala, ifowuni iyafa.
Ungacebisa esi siginali kubantu endibaziyo? Ewe, ngaphandle kwamathandabuzo. Ukuba unako ukuyithenga, yithenge. Ukuba umbuzo ibingu: Galaxy S2, HTC Sensation okanye LG Optimus 2x… ndingathandabuza kakhulu. Kwaye wena? Ungakhetha eyiphi?
Ndikushiya iividiyo kunye nemifanekiso yesiphelo esisebenzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » Ukuvavanywa 2the LG Optimus 2x (III)
Isantya se2.224 seSensing yam ngeQuadrant
Ewe ndine-LG 2x kunye ne-Samsung GSII kufuneka nditsho ukuba ndikhetha i-Samsung izihlandlo eziliwaka. Ngesizathu esilula, inkunzi yegusha: ungabona kakhulu i-1gh yesamsung eyenza ukuba yonke into ihambe kakhulu ngaphandle kolunye uhlobo lokusika nantoni na oyenzayo. Kwelinye icala, i-512mb ye-lg imfutshane kakhulu, ukuba udlala umdlalo kwaye ufuna ukutshintshela kwenye ngaphambi kokuba ubulale imemori okanye iphazamise (kwaye loo nto isekelwe kwaye isuse iinkqubo zokusebenza ezimbi kakhulu). Oko kukuthi, ukuba kukho ukungqinelana okungakumbi kwimidlalo kwi-lg, ngakumbi i-tegra, kodwa ezinye ziye zithande ukuba ngcono kwi-lg.
Kwaye ngaphandle koku ixabiso le-LG lixabisa ngaphezulu kwe-100 euro engaphantsi, kodwa ngokunyanisekileyo, ukuba unako ukuyifumana, ndingayibamba i-Samsung.
Okokugqibela uvakalelo lweHTC andikaluvavanyi ukuze ndingabinako ukuphawula.
Ndiyazibuza ukuba kutheni ndingaze ndibhekise kwi-motorola atrix kweli phepha, ifowuni ehambelana nabo bakhankanywe kwinqaku.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ndiza kunamathela kwi-Samsung Galaxy S2.
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, oku kuhle kakhulu kodwa ndiyayithanda i-galaxy S II ngcono
Ngomnikelo wangoku, ndihlala nalo, ukugqitywa kukhohlakele kwaye ngexabiso eliphantsi unesiphelo ngexabiso elifikelelekayo (ndine-19,9 + VAT yeenyanga ezili-12, emva koko ingu-24,9 kunye nesiphelo se- € 79) kodwa Ewe lonto ibikwinyanga yokuqala.
Ngokubhekisele kwimidlalo yokuthi iyahamba kakuhle, ezi zintathu ndizamile ubuncinci:
Umdyarho weGt HD
Isiqhamo seNinja THD
Olunye umdla, kwincasa yam kushushu kakhulu ukuyilayisha emotweni kunye nokusebenzisa iGPS. Ukuphumla okukhulu, Ukulinda isonka sejinja !!
Ewe, imidlalo ilungile kum ngaphandle kokuguqula okanye ukupakisha nantoni na, ikhutshelwa ngqo kwi-sd yangaphakathi kwaye isebenza ngaphandle kwengxaki kwaye ndinezimbalwa ezivela kwigameloft.
Akukho ngqiqweni sitsho
Kulawo aphume kulo nyaka ngaphandle kwamathandabuzo yile yeyona ibambe umdla wam, ndingumntu othanda i-LG kuzo zonke iimveliso zayo kwaye bahlala bebonelela ngezinto ezikumgangatho ophezulu kakhulu ngamaxabiso afanelekileyo, ngethemba lokuba ndingayifumana i-Optimus 2x ngaxa lithile
Imibuliso kunye nombulelo wokujonga kwangaphambili !!
Ukubona i-LGO2x ibiza malunga ne- € 500 yasimahla malunga ne- € 650 evela kwi-SGSII, ndicinga ukuba kumgangatho / kwixabiso i-LG ibhetele ngaphandle kokuthandabuza, ewe uzimisele ukusebenzisa imali ngaphandle kokujonga i-SGSII kwezinye iindlela idlula i-LG. . Iinkalo ezinje ngenkunzi yegusha, esebenza kwi-1.2Ghz kunye nakwisikrini nakwezinye iimvavanyo zokubekwa uphawu (ayizizo zonke, ukuba sithetha ngeFPS zezi ziphumo zezi: LG 70.0 SGSII 55.5)
Amaxabiso alapha kwi-SPAIN ye-LG OPTIMUS X2 € 409,99 VAT EBANDAKANYIWE apha
I-Samsung Galaxy S2 ixabisa i-599,99 € kunye ne-VAT ALPOST € 100 ngaphezulu kwaye ngaphandle kwentambo ye-HDMI kodwa isigqibo siphakathi kwezi fowuni zimbini, kwaye inyani kukuba sisengxakini kwaye ndikhethe i-LG optimus X2 elinde iGingerbred ukuyinika enkulu impembelelo kwaye kulapho kuya kufuneka sithelekise ezi zimbini.
Phendula ku david_salsero
Jonga iwebhu kwaye sele iphantsi kune-LG Optimus X2 ngoku ikwi- $ 394,99 YONKE.
Eli nyathelo liza kuhla liye kwi-350 yeerandi ke andizukuthandabuza ukulithenga.
Maria Souza sitsho